हो, त्यो हाम्रो गल्ती थियो - अन्तरवार्ता - साप्ताहिक
हो, त्यो हाम्रो गल्ती थियो
८ करोड ७० लाख फेसबुक प्रयोकर्ताको तथ्याङ्क चोरिएको विषयलाई लिएर यतिबेला फेसबुक चर्को आलोचना एवं विवादमा तानिएको छ । यो प्रकरणले फेसबुकसँग जोडिएका मनिसहरूको गोपनीयतामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । कतिपय मानिसले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट नै डिलिट गरेका छन् भने फेसबुकको सेयरमा समेत भारी गिरावट आएको छ ।
डाटा लिकको खबरपछि फेसबुकका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्क जुकरबर्ग समस्यामा परेका छन् । अघिल्लो सोमबार र मंगलबार अमेरिकी सिनेटको सुनुवाइमा भाग लिएका जुकरबर्गले डाटा लिकको जिम्मेवारी लिँदै सिनेटसमक्ष माफीसमेत मागे । सुनुवाईका दौरान जुकरबर्ग एकदमै गम्भीर देखिन्थे । डाटा लिकको मामिलामा उनी सिनेटका सदस्यहरूको निशानामा रहे । जुकरबर्गले अमेरिकी कंग्रेससमक्ष लिखित बयान दर्ता गराउँदै डाटा दुरुपयोगलाई लिएर माफी मागेका थिए ।
बेलायतको डाटा विश्लेषक कम्पनी क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले अमेरिकी चुनावका सिलसिलामा फेसबुकसँग भएको विभिन्न व्यक्तिको तथ्यांक दुरुपयोग गरेको विषयमा फेसबुकले निकै चर्को आलोचनाको सामना गर्नुपरिरहेको छ । फेसबुकमाथि फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूको व्यक्तिगत सूचना जम्मा गरेर अमेरिकी निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई फाइदा पुर्‍याएको आरोप समेत लागेको छ ।
ठूलो मात्रामा प्रयोगकर्ताहरूसम्बन्धी तथ्यांक चोरी भएपछि अमेरिकामा त ठूलै पराकम्पन गएको छ । अमेरिकी कंग्रेसमा सिनेटरहरूले मार्क जुकरबर्गसँग दुई दिन लगाएर ५–५ घण्टा गरी १० घण्टामा ६ सयभन्दा बढी प्रश्न सोधेका थिए । सिनेट सदस्यहरूले सोधेका प्रश्नबाट मार्क जुकरबर्ग निकै हैरान देखिन्थे । जुकरबर्गसँग फेसबुकको डाटा चोरी, व्यक्तिगत गोपनीयताको सुरक्षा, निर्वाचनमा वैदेशिक हस्तक्षेपको आमन्त्रणजस्ता विषयमा अमेरिकी कंग्रेसमा सिनेटहरूद्वारा सोधिएका प्रश्न तथा उनले दिएको उत्तर :
फेसबुकद्धारा प्रयोगकर्ताको डाटा कुनै तेस्रो पार्टीलाई जानकारी बिना पठाइएको तपाईंको सम्झनामा छ ? यदि छ भने कति पटक ?
जुन एप्लिकेसनसँग धेरै सूचना छन्, हामी अहिले त्यस्ता एपहरूमाथि निगरानी गरिरहेका छौं । विगतमा हामीले कुनै एपलाई प्रतिबन्धित गरेको मलाई सम्झना छैन ।
तपाईंले बिना जानकारी चोरी भएको तथ्यांकका सम्बन्धमा अडिट गर्नुभएको छ कि छैन ? छ भने कति पटक ?
हामीले गरेका छौं, ठ्याक्कै कति पटक भन्ने चाहिँ सम्झना भएन । यद्यपि आगामी दिनमा त्यस्तो नहोस भनेर हामी प्रतिबद्ध छौं ।
फेसबुकले दुई तीन पेजको डाटा पोलिसीका बारेमा मात्र भन्छ । जस्तै एकअर्कालाई जोड्ने इत्यादि, तर फेसबुकभित्रका अति आवश्यक डाटा पोलिसीका बारेमा केही भन्दैन, जुन एकदम आवश्यक छ । प्रयोगकर्ताको डाटाभित्र कसरी काम हुन्छ ?
के–कति डाटा सेयर गर्न चाहने हो त्यो प्रयोगकर्ताकै हातमा हुन्छ । भित्रको प्राइभेसी पोलिसी बुझ्न एकदमै गाह्रो भएकाले प्रयोगकर्तालाई जानकारी नदिइएको हो ।
प्रयोगकर्ताले आफ्ना जानकारी गोप्य राख्न फेसबुकलाई पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा साँचो हो ?
फेसबुकमा नचाहिने विज्ञापन नदेखिने बनाउन आवश्यक पैसा खर्च गर्नुपर्छ । जुन रूपमा अहिले विज्ञापन आउँछन्, त्यसबाट नै फेसबुक चलेको हो । बिना विज्ञापन फेसबुक चलाउन गाह्रो हुन्छ ।
क्याम्ब्रिज एनालाइटिकाले ८ करोड ७० लाख अमेरिकी प्रयोगकर्ताको सूचना फेसबुकमार्फत चोर्दा तपाईंले ती ८ करोड ७० लाख जनतालाई किन सुचित गर्नुभएन ?
क्याम्ब्रिज एनालाइटिकाले उक्त सूचना फेसबुकको एप डेपलपभरबाट लिएको थियो । हामीले जब त्यो कुरा थाहा पायौं तत्काल त्यो एप र क्याम्ब्रिज एनालाइटिकालाई सबै सूचना निष्क्रिय पार्न भनेका थियौं । उनीहरूले ती सूचना निष्क्रिय तुल्याएको सूचना पनि हामीलाई दिए, तर त्यो साँचो रहेनछ । यो विषयमा पर्याप्त काम नगरेकोमा हामीलाई पछुतो छ । त्यो हाम्रो गल्ती थियो ।
तर तपाईंले प्रयोगकर्तालाई यस विषयमा किन केही भन्नुभएन ?
क्याम्ब्रिज एनालाइटिकाले हामीले सबै सूचना निष्क्रिय तुल्याइसक्यौं भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई फेरि दोहोर्‍याएर हेरेनौं । त्यही भएर कुनै प्रयोगकर्तालाई सूचित गरिएन ।
फेसबुकले धेरै वर्षदेखि गोपनीयतासम्बन्धी प्रश्न खेपिरहेको छ । यो पहिलो घटना होइन । यस्ता प्रश्न उठेपछि विगतको तुलनामा अहिले फेसबुकको गोपनीयतामा के परिवर्तन भएको छ ?
फेसबुकको सुरुवातदेखि नै धेरै गल्ती भएका छन् । हामीले यस्ता गल्ती समयसँगै सच्याइरहेका छौं, तर अहिलेको समस्याजस्तै ठूला गलत समाचार, बाहिरी देशको प्रभाव, चुनावमा पर्ने प्रभावमाथि चाहिँ अझै केही ठूला कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि हामीले प्रशस्तै काम गर्नुपर्नेछ । आउने दिनमा प्रयोगकर्ताहरूले केही राम्रा चीज देख्न पाउनु हुनेछन् ।
तथ्य वा गलत सूचनाका बारेमा फेसबुकले कसरी मूल्यांकन गर्छ ?
फेसबुकले सुरुमा सूचना विवरण (data cantact) हेर्छ । फेसबुकले कृत्रिम बौद्धिकता (AI-Artificial Intelligence) मार्फत योग्य–अयोग्य सूचना छुट्याउँछ र अयोग्यलाई आम जनतासामु पुग्न दिँदैन ।
फेसबुकले अमेरिकी चुनावमा विदेशी हस्तक्षेप रोक्न के गरिरहेको छ ?
हामीले नयाँ र एकदमै बलिया AI टुल बनाएका छौं । जुन गलत र नक्कली आइडीहरू छन् र जुन आइडीले हाम्रो सिस्टमलाई ह्याक गर्ने प्रयास गर्छन् त्यस्तालाई निगरानी गर्दै हटाएका छौं । यस्ता आइडीहरू जसले चुनावमा गलत सूचना फैलाउँछन् त्यसलाई नियाल्दै त्यस्ता फेक आइडीमाथि बन्देज लगाएका छौं । यो वर्षभित्र हामी २० हजार मानिसलाई सूचना निरीक्षणमा लगाउँदैछौं ।
फेसबुकमा गलत सूचना फैलाउनेहरूलाई कसरी सजाय दिँदै हुनुहुन्छ ?
हामीले त्यस्ता नक्कली आइडीहरूलाई बन्द गरिदिएका छौं । रूसका ४ सय ७० नक्कली आइडी, जुन अमेरिकन चुनावमा हस्तक्षेप गर्न बनाइएका थिए । त्यसैगरी अस्ती भर्खर रूसबाट चलाइएका २ सय ७० आइडी पनि बन्द गरेका छौं । समग्रमा हजारौं यस्ता फेक आइडी बन्द गरेकोमा हामी खुसी छौं ।
फेसबुकले २०१५ मै क्याम्ब्रिज एनालाइटिकालाई किन बन्द गरेन ?
क्याम्ब्रिज एनालाइटिकाले सन् २०१५ मा फेसबुकको कुनै सर्भिस प्रयोग गरेको थिएन । त्यसैले बन्द गर्न उसको कुनै पेज वा विज्ञापन हामीसँग थिएन ।
२०१० मा तपाईंले फेसबुक सधैं नि:शुल्क हुन्छ भन्नुभएको थियो । के फेसबुक सधैंभरिका लागि नि:शुल्क रहनेछ ?
हो, फेसबुक सधैंका लागि नि:शुल्क हुनेछ ।
तर, फेसबुक सधंैका लागि नि:शुल्क भए तपाईं कसरी आफ्नो कम्पनी सुचारु राख्न सक्नुहुन्छ ?
हामी विज्ञापनमार्फत आम्दानी गर्छौं ।
क्याम्ब्रिज एनालाइटिकाले कसरी यस्तो कार्य गर्‍यो भन्ने विषयमा केही ज्ञान छ ?
२०१६ मा ट्रम्पलाई सहयोग गरिरहेको क्याम्ब्रिज एनालाइटिकामा फेसबुकका कुनै मानिस आबद्ध थिए ?
ट्रम्पले फेसबुकसँग पनि सहयोग मागेका थिए । हामीले ट्रम्पलाई सहयोग गरेका थियौं, जसरी हामीले विज्ञापनदातालाई फेसबुकमार्फत सहयोग गर्छौ, तर क्याम्ब्रिज एनालाइटिकामा फेसबुकको कुनै व्यक्ति आबद्ध भएको मलाई सम्झना छैन ।
तपाईंको कम्पनीको बोर्डमा यस्ता समस्याका बारेमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन ? तपाईंले यस्ता समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्नुभएको छ कि छैन ?
यस्ता समस्यामा छलफल हुन्छ । गोपनीयता र चुनावमा वैदेशिक हस्तक्षेप अहिलेका हाम्रा मुख्य समस्या हुन् । हामी यसलाई रोक्न एकदम प्रयास गरिरहेका छौं ।
फेसबुक ह्याक भएको छ ?
भएको छ, तर त्यति लामो समय हुन सकेन । सन् २०१३ मा त्यस्तो घटना भएको थियो ।
फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूले फेसबुकले फेसबुकबाहेकका अरू साइटमा पनि आफ्ना गतिविधि अनुगमन गर्न सक्छ भन्ने थाहा पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?
फेसबुक प्रयोगकर्ताले आफू कहाँ–कहाँ निरीक्षण भैरहेको छु भनेर फेसबुकमार्फत नै थाहा पाउँछन् ।
तपाईं फेसबुकको डाटा एकाउन्ट होल्डरको सम्पत्ति भन्नुहुन्छ । तपाईंले त्यही डाटाबाट वर्षको ४० बिलियन डलर कमाउनुहुन्छ । तपाईंले फेसबुकको डाटालाई एकाउन्ट होल्डरको डाटा भनेर कसरी भन्नुभएको हो ?
एकाउन्ट होल्डरको डाटा भन्नुको अर्थ त्यो डाटामाथि एकाउन्ट होल्डरको पूर्ण रूपमा अधिकार छ भन्ने हो । व्यक्तिले आफूसँग सम्बन्धित तथ्यांक कुन प्रकारले प्रयोग गर्छ त्यो ऊ आफैंमा भर पर्छ । त्यसैले तपाईंले आफ्नो डाटा फेसबुकलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिनुपर्छ, अन्यथा फेसबुकले त्यसको प्रयोग गर्दैन ।
कुनै पनि एकाउन्ट डिलिट गर्दा त्यसको ब्याकअप कपी कति समयका लागि रहन्छ ? एकाउन्ट डिलिट गरेपछि पनि ब्याकअप डाटा किन कायमै रहन्छ ? त्यो हट्छ कि हट्दैन ?
ती ब्याकअप कपीहरू कति समयका लागि रहन्छन् भन्ने चाहिँ मलाई पनि ठ्याक्कै थाहा छैन, तर ती कपी पछि डिलिट हुन्छन् भन्नेमा चाहिँ म विश्वस्त छु ।
फेसबुकमा आएका उजुरीहरू कसरी सुल्झाइरहनु भएको छ ?
हामीले पहिलेको भन्दा प्रभावकारी र मजबुत हिसाबले समस्या समाधान गर्दैछौं ।
यस्ता समस्याका बारेमा जानकारी, अडिट गरिरहनुभएको छ ?
हामीहरू गर्दैछौं र पहिलेको भन्दा राम्रोसँग गर्दैछौं ।
विज्ञापनबाट कसरी पैसा कमाउनुहुन्छ ?
विज्ञापनदाताले जुन कार्यका लागि विज्ञापन दिएको हो त्यो कार्य सफल भए हामीलाई पैसा दिन्छन् ।
फेसबुक प्रयोगकर्ताका लागि राम्रो गर्नेभन्दा पनि तपाईंको उद्देश्य अर्कैतिर मोडिएजस्तो देखिन्छ नि ?
हाम्रो उद्देश्य त्यसरी मोडिएका छैनौं । हामीले कहिल्यै विज्ञापनदाताहरूलाई प्रयोगकर्ताभन्दा माथि राखेका छैनौं, तर यो कम्पनी राम्रोसँग चल्न फाइदामा जानुपर्छ एवं त्यसका लागि हामीले विज्ञापनदाता एवं सेयर होल्डरहरूसँग मिलेर जानुपर्छ ।
तपाईंको टर्म अफ सर्भिस कति जनाले पढ्छन् ? तपाईंलाई थाहा छ ?
एकदमै थोरै, तर फेसबुकले आफ्ना हरेक प्रयोगकर्तालाई टर्म अफ सर्भिस पढ्ने मौका दिएको छ र प्रयोगकर्ताले त्यो नपढे पनि फेसबुकप्रति उनीहरू सहमत छन् भन्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
कोगन (Kogan) ले फेसबुकको तथ्यांक क्याम्ब्रिज एनालाइटिकाबाहेक अरू कसैलाई बेचेको छ ?
छ, युनोइया (Eunoia) अर्को कम्पनी हो, जसलाई कोगनले तथ्यांक बेचेको थियो, तर अरु धेरैलाई बेचेको हुनुपर्छ भन्नेमा पनि म विश्वस्त छु ।
तपाईंसँग कोही जोन केन्डीको फाइल हेर्छु भनेर आउन पाउँछ ?
अहँ, पाउँदैन ।
तपाईं आफै पनि जोन केन्डीको फाइल हेर्न सक्नुहुन्न ?
हेर्न सकिन्छ तर त्यो नियमको उल्लंघन मानिन्छ ।
क्याम्ब्रिज एनालाइटिकाले ८ करोड ७० लाख प्रयोगकर्ताको डाटा चोरेको तथा नियमको उल्लंघन भएको थाहा पाएपछि यस विषयमा फेसबुकमा कुनै कुराकानी भयो कि भएन ? यो कुराको जानकारी जनतालाई किन दिइएन ?
फेसबुकभित्र यसका बारेमा कुराकानी भएको मलाई थाहा छैन । फेसबुकभित्रका कसैले पनि यसका प्रयोगकर्तालाई यस विषयमा केही नभनौं पनि भनेनन् ।
फेसबुकले मोबाइलबाट अडियो पनि तान्न सक्छ ? यसले मोबाइलको अडियो पनि प्रयोग गर्न सक्छ ?
के तपाईं हाम्रो फोन कल पनि रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ ?
हामी फोन कलसँग सम्बद्ध कुनै पनि कुरा संकलन गर्दैनौँ ।
तपाईं आफूलाई पीडित सम्झनुहुन्छ ? तपाईंलाई आफ्नो कम्पनी पीडित भएजस्तो लाग्छ ?
होइन, हामी पीडितचाहिँ होइन बरु हामीमाथि सम्पूर्ण समाजलाई जोगाउने उत्तरदायित्व छ ।
तपाईं ती ८ करोड ७० लाख जनतालाई पीडित भन्नुहुन्छ ?
हो, यो एक प्रकारको नराम्रो घटना हाम्रै आँखा अगाडि भयो र उनीहरू फस्न बाँध्य भए ।
फेसबुकमा विविधताको कमी छ । तपाईंको फेसबुकले कुनै पनि नागरिक अधिकार संस्थाको साथ लिएर यस्ता समस्या सुल्झाउन केही गर्न सक्छ ?
यो एकदम राम्रो सोच हो । यदि त्यसरी आबद्ध हुन चाहे आबद्ध हुन सकिन्छ ।
कानुनी संस्थाले फेसबुकमार्फत कसैमाथि आँखा लगाउँछन् । के तपाईं विश्वस्त तुल्याउन सक्नुहुन्छ फेसबुकले कानुनी संस्थाहरूलाई यसमार्फत कसैमाथि आँखा लगाउने अधिकार दिएको छैन ?
त्यस्तो अधिकार दिएको छैन । कानुनी संस्थाले हामीबाट अनुमति लिइसकेपछि मात्र त्यस्तो कार्य गर्न पाउँछन् ।
फेसबुकमा नागरिकविरुद्धको भेदभावजस्ता विषय पनि व्याप्त छन् । यसका लागि के–कस्तो कदम चलाइरहनुभएको छ ?
यसका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (Artificial Intelligence-AI) का माध्यमबाट काम गरिरहेका छौं, तर यसमा अलिक बढी जोड दिनुपरेको छ र यसमा हामी अझ राम्रोसँग काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । अहिलेको अवस्थामा खुसी हुनुपर्ने चाहिँ देखिँदैन, अझ धेरै कार्य गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको तपाईंको मुख्य काम के हो ?
अब आउने वर्षहरूमा हुन लागेका कुनै पनि चुनावमा हस्तक्षेप हुन नदिनु ।
फेसबुक एउटा टेक्निकल कम्पनी हो कि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रकाशक ?
मेरो हिसाबले फेसबुक एउटा टेक्नीकल कम्पनी हो । हामी यसभित्रका सामग्री वा सूचनाका लागि हकदार छौं, तर हामी आफै सूचना वा सामग्री बनाउँदैनौं ।
रूस र चीन सरकारसँग फेसबुकको डाटा जम्मा भैरहेको आरोपमा कति सत्यता छ ?
हामी यस विषयमा अध्ययन गर्दैछौं । हामीलाई ती देशका बारेमा खासै ज्ञान छैन् तर ती देश पक्कै पनि फेसबुकबाट फाइदा लिन खोजिरहेका छन् ।
तपाईं कुनै यस्तो कानुनको पक्षमा उभिनुहुन्छ, जसले फेसबुक वा अरू माध्यमबाट आएका सूचनाहरू अरू सन्दर्भमा प्रयोग गर्नुभन्दा अघि अनुमति लिन जरुरी छ ?
यो एकदमै ठीक कुरा हो ।
यो सन्दर्भमा तपाईं कानुनलाई सहयोग गर्नुहुन्छ ?
अवश्य, तर हरेक विवरण र बेहोरा हेर्नु जरुरी छ ।
सामाजिक सञ्जालको लत चिन्ताको विषय हो कि होइन ?
यो त सबैले सोच्ने विषय हो, तर कति प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ता आफैंले विचार गर्नुपर्छ ।
फेसबुक सुरक्षित अनुभव गर्नका लागि हो कि यसबाट सुरक्षित हुनका लागि ?
फेसबुक आफैंमा सुरक्षित भएकाले म आफंै र मेरो परिवार हरेक समय यसको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं ।
फेसबुकका के–कति कुरा स्टोर हुन्छ । के हामीले क्लिक गरेका सबै चीज कतै स्टोर हुन्छन् ?
हो, फेसबुकमा स्टोर भैरहेका हुन्छन् ।
फेसबुकले कोही हिजो राति बसेको होटलको नाम सेयर गर्न सक्छ अथवा कसैलाई पठाएको म्यासेज सेयर गर्न सक्छ ?
अहँ सक्दैन, कुनै व्यक्तिले आफ्ना के–कति सूचना सेयर गर्न चाहने हो, त्यो सबै उसको आफ्नै हातमा हुन्छ ।
के फेसबुक कसैको एकाधिकार हो ?
मलाई त त्यस्तो लाग्दैन ।
त्यसो भए हामीले किन आफ्ना सूचना तपाईंलाई परिचालन गर्न दिने ?
परिचालन त जसले पनि गर्न सक्छन्, तर हामीहरू सही परिचालनका लागि बसेका हौं ।
प्रयोगकर्ता लगआउट भैसकेपछि पनि फेसबुकले त्यसको ब्राउजिङ डाटा ट्रयाक गर्न सक्छ ?
फेसबुकले अययपष्भक लाई ट्रयाक गर्छ ।
(गार्जियन र अन्य एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
२६ वर्षअघिको त्यो होली
रंगशाला बनाउने घोषणा गरेर हामीले के गल्ती गर्‍यौं ?
फ्ल्यासब्याकमा रामकुमारी : आधा रातसम्म हुने त्यो फोन वार्ता
स्किल बढाउन ध्यान दिनुपर्छ वैशाख १०, २०७६
कुमार कट्टेल भन्छन्, ‘स्टेडियम बन्छ, जसरी पनि बन्छ’ चैत्र २९, २०७५
स्टेजमा एक्लै भएको छु चैत्र २६, २०७५
हार्दा पनि आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ चैत्र १८, २०७५
नेपाली खानाको स्वाद मीठो लाग्छ चैत्र १३, २०७५
मेरो प्रेम विवाह नै हुन्छ, कुरो बुझ्नुभो ? चैत्र ५, २०७५
होलीको मिठास त गाउँमै छ चैत्र ५, २०७५
क्रिकेट छोडेर विदेश जाने योजनामा थिएँ फाल्गुन २९, २०७५
हामीकहाँ असीमित अवसर छ : सुमन पोखरेल  फाल्गुन २०, २०७५
सर्पको मान्छेसँग कुनै स्वार्थको सम्बन्ध छैन फाल्गुन १५, २०७५